कंगनाको पारिश्रमिक पाँच गुणा बढ्यो ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 10:48:36
जापानी समय : 02:03:36
Tag: कंगनाको पारिश्रमिक पाँच गुणा बढ्यो ?
कंगनाको पारिश्रमिक पाँच गुणा बढ्यो ?
Posted on December 11, 2016 by Yadav Devkota
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर १५ करोड पुर्याएको खबर प्रकाशित भएको छ । हालै मात्र उनले दुई निर्माताहरुसँग आफ्नो पारिश्रमिक अब १५ करोड भएको भन्दै प्रति सिनेमा १५ करोडको माग राखेकी छिन् ।
कंगनाको मागलाई निर्माताहरुले पूरा गरे नगरेको भने पुष्टि भएको छैन । तर उनलाई निर्माताहरुले १५ करोड दिएभने उनी बलिउडकै महंगी अभिनेत्री बन्नेछिन् । यो भन्दा पहिले उनले एक सिनेमाको ३ करोड लिन्थिन् ।
यस हिसाबले यदि उनको पारिश्रमिक १५ करोड भयो भने उनको पारिश्रमिक पाँच गुणा बढ्नेछ । कंगनाभन्दा पहिले दीपिका पादुकोण बलिउडकी सबैभन्दा महंगी अभिनेत्री थिईन् । दिपिकाले संजय लिला भंसालीको पद्मावतीका लागि १३ करोड पारिश्रमिक लिएकी छिन् ।
Posted in कला/मनोरन्जन, वलिउडTagged कंगनाको पारिश्रमिक पाँच गुणा बढ्यो ?